WordPress: အခြားဆာဗာသို့အရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ယူခြင်း Martech Zone
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 6, 2007 Douglas Karr
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ site ကို comment-spam bot များ (သိပ္ပံဝတ္ထုကဲ့သို့သောအသံများ) ကတိုက်ခိုက်သောအခါတိုက်ခိုက်မှုကိုမတားဆီးမီကျွန်ုပ်၏ server ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ WordPress အတွင်းရှိဒေတာဘေ့စ်သို့မဟုတ်ဖိုင်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အဂတိလိုက်စားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်၊ ဆိုဒ်သည်မဆင်းဘဲနာရီအနည်းငယ်ထက်မကကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါသည်ငါ့ site ကိုငါ့ reseller အကောင့်မှာအကောင့်အသစ်တစ်ခုသို့ရွှေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းအားသာချက်ယူခဲ့ပါတယ် Jumpline.com ။ ငါနှစ်တွေတစ်လျှောက် Jumpline နှင့်အတူအလွန်အမင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၃၀ ခန့်ကိုလက်ခံပြီးကျွန်ုပ်နှင့်အတူပါ ၀ င်သောဖောက်သည်များထံမှဖုန်းခေါ်စရာမလိုတော့ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုကအံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးသူတို့ရဲ့ထောက်ခံအားပေးတဲ့အဖွဲ့ကအရမ်းကောင်းတယ်။
သူတို့၏ထောက်ခံမှုနည်းပညာများသည်ကျွန်ုပ်၏ site ကိုသတ်ဖြတ်နေသည့် spam-bot အချို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသောယောက်ျားများဖြစ်သည် (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!) အကောင့်အသစ်သို့ပြောင်းခြင်းသည်ယခုဆိုဒ်အား PHP / MySQL နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်ထည့်ပြီးအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သော Ajax Webmail အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။
ငါမသိတာကလုပ်ဖို့ကြိုးစားရတာမယုံနိုင်လောက်အောင်နာကျင်မှုပဲ သန့်ရှင်းသော WordPress ကိုတပ်ဆင်ခြင်း။ ထိုပလပ်အင်အများစုသည်သင်၏ WordPress ဒေတာဘေ့စ်တွင်ကွက်လပ်များနှင့်ဇယားများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ် plugins နှင့်အဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဒေတာဘေ့စ်သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ WordPress (သို့) ဒေတာဘေ့စ်ကိုအရန်ကူးယူပြီးအကောင့်အသစ်တွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသည်ပြtheနာများကိုရွှေ့ပြောင်းရုံသာဖြစ်လိမ့်မည်။ အနိမ့်ဆုံးအနည်းဆုံးတော့အဲဒီမှာထပ်ထည့်စရာအကွက်တွေ၊ ပလပ်အင်ကိုပိတ်ထားသည့်အခါအနာဂတ် WordPress လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒေတာဘေ့စ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုပုံစံများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုသည်။
သင်၏ WordPress ဘလော့ဂ်ကိုပြန်လည်တင်သွင်းရန် XML သို့ထုတ်ပေးမည့်နောက်ထပ်ပလပ်ဂင်အချို့ကိုပင်ငါကြည့်သည်။ သို့သော်သင် data များစွာဆုံးရှုံးသည်။ ၁၂ နာရီကြာပြီးတဲ့နောက် (ငါအိပ်ခဲ့ရတယ်)၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တော့အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုရွေ့လျားပြီးပါပြီ။ ဒါဟာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာလုပ်လိုက်တာက
မူရင်း site နှင့် database ကိုအရန်ကူးထား
အကောင့်အသစ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် WordPress plugins များထည့်သွင်းထားသည်။
တစ်စားပွဲနှိုင်းယှဉ်ကိုပြု၏ တိုင်း အရင်းအမြစ်ဒေတာဘေ့စနှင့် ဦး တည်ရာဒေတာဘေ့စကနေစားပွဲပေါ်မှာ။
destination database တွင်မရှိသောအရင်းအမြစ်ဒေတာဘေ့စ်ရှိအကွက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။
destination database ရှိဇယားများအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြီး (WP test ပို့စ်များကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ )
တစ်ခုချင်းစီကိုစားပွဲပေါ်မှာ၏ပို့ကုန်ကိုပြု၏ မပါဘဲ drop and recreate ။ ၎င်းသည်သော့များတူညီသောဒေတာဘေ့စ်သို့မှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။
ငါ၏အ wp-content \_ upload ဖိုင်တွဲကိုမူလအကောင့်မှ tujuan အကောင့်သို့ကူးယူခဲ့သည်။ ဒိုမိန်းအမည်ကိုငါပြောင်းပြီးကတည်းကရည်ညွှန်းကိုးကားအားလုံးသိမ်းထားတယ်။
ငါဘလော့ဂ်ကို run ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီး! ငါအချို့စာမျက်နှာစာမျက်နှာ Permalinks ကို clean up ခဲ့ကြဘာကြောင့်ငါမသိ, ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်မှအဆင်ပြေခဲ့ကြသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ WordPress တွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောဘလော့ဂ်များအတွက်တင်သွင်းမှုများထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် WordPress တင်သွင်းမှုကို WordPress သို့တင်သွင်းရန်အတွက်တင်သွင်းမှုမရှိပါ
ဒါတော်တော်များများလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအသစ်တခုပြေးနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည် အကွောငျး။ ငါရိုးရိုးလေးပဲငါ run နေတဲ့ beta ကိုဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ကိစ္စများအများအပြားရှိခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအခင်းအကျင်းကိုအထူးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်လိုချင်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏တိုင်တန်းချက်ကသာဖြစ်သည် စာရေးသူ အောက်ခြေ> body> tag အထက်တွင်ရှိနေသောအခင်းအကျင်းတစ်လျှောက်ဘုံအောက်ခြေကိုမအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဂူဂဲလ် Analytics script ကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းခဲ့ရသည်။ ငါစိတ်ကြိုက်အောက်ခြေ footer တည်ဆောက်ပြီး၎င်းကိုကိုးကားနိုင်သည်။ သို့သော်အခင်းအကျင်း၏စာရေးဆရာသည် 'footer' ဟူသောအမည်ကိုသုံးပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါ။
ငါယခုတက် back ငါခန့်မှန်း! အခုငါအလုပ်လုပ်ရ!
7:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 36
ငါ့သားရဲ့ site ကိုလုပ်ရတာပျော်စရာပဲ! ငါအရင်ကရှိတယ် http://www.billkarr.com ကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်၏ subdirectory အတွင်း၌တည်ရှိသည်၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည်။
4:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 13 တွင်
ငါအမြဲတမ်း back up နှင့်ဖြေရှင်းချက် restore ပြန်, သင်၏ post ကိုငါ့အာရုံကိုရတယ်။
၂.၁ မှတည်ဆောက်ခဲ့သောတင်ပို့မှုနှင့်တင်သွင်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြထားတဲ့ဂရပ်ဖစ်နဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။
စာမေးပွဲဘလော့ဂ်ကိုပြန်ဖျက်တော့မယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ XML ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပြီးဓာတ်ပုံရဲ့တည်နေရာအသစ်ကိုပြန်ပြောင်းပြမယ်။
29:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 51
ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်၏ WordPress ဆိုဒ်ကိုမူလကတည်းကပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံကောင်းရှိသည်။ ငါအရာအားလုံးကိုနည်းလမ်းများမှတဆင့် backup လုပ်ထားရန်သေချာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်အားလုံးတော်တော်လေးကောင်းစွာသွားလေ၏။
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောအဓိကပြproblemsနာများမှာ XML ဖိုင်မှတစ်ဆင့်တင်သွင်းခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အမျိုးအစားပို့ချခြင်းတာ ၀ န်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ပို့စ်အနည်းငယ်သည်အပြည့်အဝပြန်လည်မပါ ၀ င်ပါ။ စာပိုဒ်များတွင်စာပိုဒ်တစ်ခုတည်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်အရန်ကူးထားသောဖိုင်သည်ကိုးကားချက်များကိုမလွတ်မြောက်စေဘဲ WordPress က၎င်းသည်ပို့စ်တစ်ခု၏အဆုံးရောက်ပြီဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်း database ကိုမဖျက်ခင်ကျွန်တော်ကူးယူခဲ့သော .SQL ဖိုင်မှထိုအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်ရယူနိုင်သည်။